Coffee Tea Snack | Food Magazine Myanmar | Page 19
Chocolate Cup Cake ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ထောပတ် – 100 g ♦ ကိတ်ဂျုံ (Cake Flour) – 70 g ♦ ပြောင်းဖူးဂျုံ (Corn Flour) – 10 g ♦ ....
”ကျန်းမာချင်လား၊ ကော်ဖီသောက်လိုက်” (အပိုင်း ၂)
”ကျန်းမာချင်လား၊ ကော်ဖီသောက်လိုက်” (အပိုင်း ၂) ကော်ဖီသောက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုစေလား ဆိုတဲ့ကိစ္စကို ပြီးခဲ့တဲ့ October လ ဆောင်းပါးမှာ အပိုင်း (၁) အနေနဲ့ စာရေးသူမှ စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ သောက်သုံးသင့်မသင့် စဉ်းစားနိုင်အောင် အချက် (၅) ချက်ကို ဖော်ပြဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ....
9 - November - 2015
Butter Pound Cake ကော်ဖီချစ်သူများအတွက် ခုလုပ်ပြတဲ့ အိမ်လုပ် Butter Pound Cake ဟာ လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး ကော်ဖီနဲ့ လိုက်ဖက်လှတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကော်ဖီချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ မနက်စာပဲဖြစ်ဖြစ် ကော်ဖီအရသာကို ပိုပေါ်လွင်စေ မှာပါ လုပ်နည်းအောင်ကြည့်ရအောင် . . . ။ ....
”ကျန်းမာချင်လား၊ ကော်ဖီသောက်လိုက်” (အပိုင်း ၁)
”ကျန်းမာချင်လား၊ ကော်ဖီသောက်လိုက်” (အပိုင်း ၁) ကော်ဖီ။ ကျန်းမာရေး။ အိပ်မပျော်နိုင်ဘူး ! ရင်တုန်မှာပေါ့ ! . . . စသဖြင့် အငြင်းပွားနိုင်ပါတယ်။ ကော်ဖီနဲ့ ကျန်းမာရေး ဆက်စပ်လိုက်ရင် သို့လောသို့လော ပြောချင်စရာတွေများသား။ ‘ကော်ဖီဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းရဲ့လား’ ....
1 - October - 2015
Tiramisu Mille Crepes
Crepes ကိတ်ကို Tiramisu အရသာနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ Tramisu နှစ်သက်သူများ သဘောကျ နှစ်သက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ (၇ လက်မဘန်းဆိုဒ်) ♦ နွားနို့ – ၂၅ဝ ဂရမ် ♦ ကြက်ဥ – ၂ လုံး ♦ ....
အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကတော့ ချောကလက်အရသာ Mille Crepes ကို လုပ်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ဆိမ့်ပြီး အရသာရှိလှတဲ့ ဒူးရင်းသီးအရသာ Mille Crepes လုပ်စားကြည့်ကြရအောင်။ ဒူးရင်းသီးနှစ်သက်သူများ ကြိုက်ကြမယ့် ကိတ်တစ်ခုပါ။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ (၇ လက်မဗန်းဆိုဒ် အလွှာ ၂၂ ခုစာ) ....
24 - August - 2015
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေ . . . ကော်ဖီကို ဘယ်လိုသောက်ပါသလဲ? ဒီလိုမေးခွန်းမျိုး အမေးခံရရင် ‘ကော်ဖီပဲ ခွက်ထဲထည့်ဖျော်ပြီး ပါးစပ်ထဲမျိုချ သောက်တာပေ့ါလို့’ ပြောရင်ကော မမှားဘူးလား။ မမှားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကော်ဖီကောင်းတစ်ခွက်ကို သောက်ရင် Wine ကောင်းတစ်ခွက်ကို သောက်သလိုပဲ ခံစားမှုများစွာနဲ့ အရသာခံသောက်သုံးကြည့်ပါ။ ....
ဒီလ Coffee, Tea and Snack အစီအစဉ်အတွက်တော့ ကိုယ်တိုင်ဆန်းသစ်ကြည့်ထားတဲ့ Recipe အသစ်ကလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ရိုးရိုးထောပတ်ကိတ်ကိုမှ Almond Meal ထည့်ထားတော့ အရသာဆိမ့်ဆိမ့် မုန့်သားမွမွနဲ့ တော်တော်စားလို့ကောင်းပါတယ်။ Almond Tart နဲ့ Butter Cake ကြားထဲက ....
နေ့လယ်နေ့ခင်း ကော်ဖီချိန်အတွက်ဆိုရင်တော့ နူးညံ့ပြီး အရသာရှိလှတဲ့ နှစ်ထပ်ကွမ်းချောကလက်ကိတ်ကို ရွေးချယ်ချင်ပါတယ်။ လုပ်ရတာ လွယ်ကူမြန်ဆန် ပြီးချောကလက်မုန့်သားရယ် ချောကလက်ခရင်မ်ရယ် တွဲဖက်ညီလွန်းတာကြောင့် ချောကလက်ချစ်သူများ နှစ်သက်ကြမှာ အသေအချာအာမခံရဲပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ နို့မပါသောကော်ဖီခါး – တစ်ခွက် (၁ Cup) ♦ ချောကလက် ....
6 - July - 2015
2 nd Myanmar National Barista Championship
Myanmar National Barista Championship MNBC 2015 ၂ဝ၁၅ မြန်မာနိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ကော်ဖီအဖျော်ပြိုင်ပွဲကြီးကို (၂ဝ၁၅) ခုနှစ် ဇွန်လ (၃) ရက်မှ (၅) ရက်အထိ ရန်ကုန်မြို့၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရှင်စောပုလမ်းရှိ Myanmar Even Park ....